Isiokwu a na-akpọ “Otu ụzọ na-Mars njem: shortlist agụnye asaa Australia” e dere site Michael Safi, n'ihi na theguardian.com na Tuesday 17 February 2015 06.18 UTC
Seven Australia mere a shortlist nke 100 oghere mmeri sọọ mpi maka otu ụzọ na-njem Mars guzosie red planet mbụ ógbè.
Iri na itoolu afọ Teah, guzo-elu ome nto ochi Josh Richards na geoscientist Electra Navarone so n'etiti ndị Australian finalists maka Mars Otu oru ngo, nke aims amalite edozi nke anọ planet anyanwụ si 2025.
Iri na itoolu afọ Sare Teah mere shortlist. Foto: Mars One
The oru ngo, guzobere Dutch entrepreneur Bad Lansdorp, azọrọ na ha natara ihe karịrị 200,000 ngwa si budding Martians, na-ekwu na ọ na-whittling ndepụta ala 50 ndị ikom na ndị 50 inyom.
The oghere mmeri a họọrọ dabeere na "nghọta ha nke ize ndụ, otu mmụọ na ha na-akpali ịbụ akụkụ nke ndụ a na-agbanwe agbanwe-njem,"Dị ka a na nkwupụta.
Oru ngo-isi ike mara, Norbert Clark, kwuru na-esote nhọrọ agba ga-elekwasị anya na-ewu ike ìgwè na ike inogide mwepu nke interplanetary mmezi.
"Ịbụ onye nke kasị mma onye mmeri adịghị na-akpaghị aka-eme ka ị kasị ukwuu otu ọkpụkpọ, otú ahụ ka m na-atụ anya ịhụ otú oghere mmeri na-enwe ọganihu ma na-arụkọ ọrụ ọnụ na-abịa nsogbu,"Clark kwuru.
Ọnọdụ a na-chọtara n'ihi na elu ala ọzụzụ ụlọ ọrụ. Ndepụta 100 aga ime ga-ebipụ site n'etiti afọ dị nnọọ 24, onye ga-zigara Mars na iche iche nke anọ ọ bụla 26 ọnwa malite na 2024.
Nke ahụ bụ nzube, agbanyeghị. Mars One bịanyere aka elu Lockheed Martin na December wuo a satellite na-etinye n'ime orbit gburugburu Mars na 2018. Ma ịrịba oru mbipụta - dị ka otú adaa a manned nka n'enweghị na Martian n'elu, na otú iwelata mmetụta nke miri-ohere radieshon na astronauts - anọgide bụrụ na e wepụghị.
The oru ngo ga-achọ dịkarịa ala $ 7.7bn ga-apụ n'ala, nke ọ Aims ịkpọlite ​​ukwuu n'ime site na-ere nkwado na ikike ka a eziokwu TV na-egosi banyere oru ngo. Otu Indiegogo mkpọsa na 2013-14 akpọlite ​​karịa $400,000. Total onyinye dị ka nke ikpeazụ November iri na banyere $630,000.
Independent na nkà mmụta sayensị analysis aro ka, megidere Mars Otu na-azọrọ, akwagide ndụ na-acha uhie uhie na mbara ala ga-achọ "teknụzụ ndị ọzọ na ike karịa ugbu a ọkaibe".
Atụmatụ na-eto eto a kụrụ n'ime ógbè, esịnede ohere capsules na inflatable ebe obibi, nwere ike n'ezie iduga a kubie ume oversupply nke oxygen, na-eme nnyocha kwuru, sị, ịkọ mbụ astroloji ga-anwụ mgbe 68 ụbọchị.
Ma finalists, gụnyere Dianne McGrath si Melbourne, na-adịghị perturbed. "Ma ndị na-eche na ọ na-aga na-Mars One, ma ọ bụ NASA, ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ omume, anyị ga-aga Mars, ọ bụ ihe na-burukwa maka ohere ngagharị,"Ọ gwara ọwa Iri si The Project.
"Nke ahụ bụ akụkụ nke mmụọ mmadụ, ịnọgide na-inyocha. M nnọọ kechioma ịbụ akụkụ nke ahụ. "